ग्याँस कि जिलेटिन विष्फोटः अनुसन्धानले लियो नयाँ मोड | Citizen Post News
सिन्धुपाल्चोक । ग्याँसको सिलिण्डर पड्किएर चार जनाको ज्यान लिएपछि विवादमा तानिएको माथिल्लो चाकु जलविद्युत आयोजनाको कर्तुतलाई प्रहरीले गम्भीरताकासाथ अनुसन्धान थालेको छ । उक्त काण्डलाई सुनियोजित रुपमै लुकाउन खोजको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले नयाँ कोणबाट पनि अनुसन्धान थालेको हो । यसअघि उक्त घटनालाई प्रहरीले पनि ग्याँसको सिलिण्डर पड्किएर चार जनाको ज्यान गएको बताएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मुकुन्द मरासिनीले उक्त घटनालाई गम्भीरताका साथ अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले भने,‘हामीले उक्त घटनालाई अनुसन्धान गरिरहेका छौं । ठोस रिजल्ट निकाल्नु प्रहरी प्रशासनको दायित्व हो, त्यसैले ढिलो–चाँडो त्यसको रिजल्ट आउँछ ।’ ग्याँस वा जिलेटिन के पड्केको हो ? त्यो अनुसन्धानबाट खुल्ने उनले बताए ।
जबकि प्रहरी र स्थानिय प्रशासनकै मिलेमतोमा उक्त घटनालाई दबाइएको थियो । जिलेटिन पड्केर चार जनाको ज्यान गएको घटनालाई माथिल्लो चाकु जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले आफ्नो प्रभाव र पहुँच देखाएर ग्याँस पड्केको घटनामा परिणत गरेका थिए । दश वटा ग्याँसको सिलिण्डर पड्किएको बताइएता पनि घटनास्थलमा सिलिण्डरका कुनै टुक्रा भेटिएको थिएन । ग्याँसको चुलो समेत ठिकठाक अवस्थामा भेटिएको थियो ।
उपरीक्षक मरासिनीले भने, ‘घटनापछि सबैको मृत्यु भयो । घाइते कोही बचेका भए घटनाको अनुसन्धान गर्न सहज हुन्थ्यो । अहिले त्यसै भएको हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ तर उनले अनुसन्धानको नयाँ पाटो नसुस्ताएको दावी गरे । घटनास्थलको प्रतिवेदन र निरीक्षणपछि पनि सामान्यतया घटना के भएको हो ? त्यो जानकारी सर्वसाधारणले त थाहा पाउन सक्ने भएता पनि एसपी मरासिनीले त्यसो भनिरहँदा पत्याउने आधार भने देखिन्न ।
उनले सो घटनाको अनुसन्धान गर्न डिएसपीको टोली खटिएको र अनुसन्धानपछि बास्तविक रिजल्ट आउने बताए । सुरुका दिनदेखिनै विवादमा पर्दै आएको उक्त आयोजनाको अवैध गतिविधि र हालसालै घटेको घटनालाई लुकाइएको भन्दै स्थानिय प्रत्यक्षदर्शीले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेपछि घटनाले नयाँँ मोड लिएको हो । गत चैत्र ११ गते चार जनाको ज्यान लिएको घटनालाई आयोजनाका लगानीकर्ताले रकम खर्चेर गुपचुप पारेको स्थानिय फुर्पा शेर्पाको दावी छ । स्थानियका अनुसार उक्त दिन ग्याँस पड्केको नभई जिलेटिन विस्फोट भएको थियो ।
विष्फोट भए लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी र प्रशासनले समेत उक्त घटना के हो ? त्यसको पहिचान गर्न हिचकिचाहट गरेपछि गुपचुप पार्न लगानीकर्ताले ठूलै रकमको चलखेल गरेको आशंका उब्जिएको हो । उक्त घटनालगत्तै ग्याँस पड्केको बताउने प्रहरी र स्थानिय प्रशासनमाथि आशंका ब्यक्त गर्दै स्थानियले जिलेटिन विष्फोट भएको दावी र प्रमाणसहित विभिन्न निकायमा उजुरी हालेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । निर्माणधिन माथिल्लो चाकु आयोजनाको लापरबाहीका कारण चट्टान फोर्न ल्याइएको जिलेटिन विष्फोट भएको फुल्पिङकट्टि र मार्मीङका स्थानियको दावी छ ।
प्रहरी र प्रशासनले उक्त घटनालाई गुपचुप पार्न प्रयास गरेपछि स्थानिय खुलेर विरोधमा निस्किएका हुन् । सो क्षेत्रका स्थानिय घाँस दाउरा लिन जान समेत छाडेका छन् । सुरक्षा निकायले त्यस ठाउँको खानतलासी गरेर स्थानियलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने स्थानिय गोरे शेर्पाले बताए । स्थानियका अनुसार उक्त घटनापछि ग्याँसको कुनै गन्ध नआएको, सिलिण्डरको कुनै पनि टुक्रा नभेटिएको, टहरा भत्किएता पनि टहराको जस्ता नजलेको तथा कालोसमेत नभएको तर मान्छेका लास मात्र यत्रतत्र छरिएका अवस्थामा भेटिएको थियो ।
करिब एक दर्जन ग्याँसको सिलिण्डर पड्किएको बताइएता पनि त्यसको असर अन्यत्र केही कतै परेको थिएन । उता आयोजनाले भने स्टोरमा भएको ग्याँसको सिलिण्डर पड्किएको दावी गर्दै आएको छ । दावीलाई पुष्टि गर्ने आधार भने भेटिएको छैन । आफ्नो जिल्लाको कोही मान्छे विष्फोटमा नपरेको भन्दै चुप लागेर बस्न नहुने र गलत क्रियाकलाप विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने कामी शेर्पाले बताए । पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिलाउनुपर्ने पनि उनले बताए ।